ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့New Browser လေးနဲ့ မိက်ဆက်ပေးချင်တယ် ။ အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်။
ပုံစံကတော့ Firefox နဲ့ တူတယ်။ အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်။ Google ကိုဒီ Web Browser နဲဖွင့်လိုက်ရင်
Google Chrome နဲ့ တူတယ် New Tap ရဲမြန်ဆန်တာကတော့ မျက်စိတစ်မှိတ်လေးမှာပဲ အရမ်းကို
လိုက်ပါပြီးတော့ Options ကို Click လိုက်ပါပြီးရင်တော့ အောက်ပုံလေးလိုက်ပေါလာလိမ့်
ပြီးရင် Content ပြီးတော့ Fonts ကို Zawgyi ကိုပြောင်း ပြီးရင်တော့ OK
Web Browser လိုပါတဲ့ ။
Posted by KHUNLAYKHAM at 13:11 No comments:
Posted by KHUNLAYKHAM at 09:55 No comments:
Rapid Plus For Auto Download
ကျွန်တော် အခုရက်ပိုင်း အလုပ်ကလေး နည်းနည်းရူပ်နေတာကြောင့် Post တွေ မတင်ပေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူငယ်ချင်းများကို ဦးစွာတောင်းပန်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ဒီနေ့မှာ Blogger တွေ အတွက်သာမက File Size အကြီးကြီးတွေ ချတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေ အလုပ်ရူပ်သက်သာစေမည့် Software လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ RapidShare နဲ့ upload တင်ထားတဲ့ Link တွေကို တစ်ခုပြီသာနဲ့ တစ်ခု စောင့်နေစရာမလိုဘဲ သူအလိုအလျောက် မိမိထည့်ထားတဲ့ Link တစ်ခုချင်ဆီကို တစ်ခုပြီသာနဲ့ တစ်ခု Auto Download ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို တစ်ခုချနေရင် နောက်တစ်ခု ချဖို့ Link ပြန်ပြန်လုပ်နေရပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ ပြန်လုပ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီ Software ကို ပြန်လည်ဝေငှာ့ပေးသေား သူငယ်ချင်း မောင်မောင်ကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Zip file ကို ပြန်ဖြေလိုက်တာနဲ့ အသုံးချနည်းကို တင်ပြထားပါတယ်။ Tutorial Folder မှာ အရင်ဖတ်ပြီမှ အလုပ်လုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by KHUNLAYKHAM at 09:21 No comments:
ကွန်ပျုတာမှာ အလှဆင်ဖို့နာရီလေးတွေပါ Alarmပါပေးလို့ရတယ်နော်
ပြီးတော့လို သလိုပြုပြင်လို့ ရပါတယ် ကိုယ့်ပုံနောက်ခံထားလို့ ရမယ် နမူနာပုံစံ
လေး ပြထားပါတယ် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ကွန်ပျုတာရှေ့ထိုင်တတ်သူများ
အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ် နာရီဒီဇိုင်း၁၀မျိုးပါတယ် Portable မလို့ အသုံး
ပြုရအရမ်းလွယ် ကူပါတယ် WindowXP တွေ ကတော့Window7သမားလို
Desktop ပေါ် နာရီအလွယ်ကြည့်ဖို့ တင်ထားလို့ ရပါပြီ ကိုယ့်နောက်ခံပုံထား
ဖို့ နဲ့ Alarmပေးဖို့ ကတော့အင်စတောလုပ်ပီး Desktopပေါ်မှာရောက်ပြီဆိုရင်
နာရီလေးပေါ် Right Click ထောက်ပီးSetting မှာ လိုအပ်သလိုပြင်ယူလိုက်ပါ
အများကြီး ပြင်လို့ ရပါတယ် Alarm လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းနဲ့ ပေးလို့ 
ရပါတယ် ကဲစမ်းချင်သပဆို ဆွဲစေဗျာ ဖလမ်းဖလမ်းထသွားစေရမယ်....။
Posted by KHUNLAYKHAM at 09:02 No comments:
မိမိလပ်တော့ကနေ wifi ပြန်လွှင့်ချင်သူများအတွက်
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထား ပါတယ်။
Posted by KHUNLAYKHAM at 08:58 No comments:
Andriod Tablet နှင့် Phone များတွင် မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း လမ်းညွှန်
Andriod Version သုံး Tablet / Phone များတွင် မြန်မာစာ Fonts ထည့်သွင်းနည်း----
Phone များတွင် ထည့်သွင်းပေးနိုင်သော်လည်း ဆိုင် တော်တော်များများတွင် Tablet များကို မြန်မာစာ Fonts များထည့်သွင်း ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြပါ။ Version နိမ့်သည်၊ မြင့်သည်နှင့် အကြောင်းပြ တတ်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်မှ ၀င်ရောက်သော 7" tablet များအသုံးပြုနေကြသူများမှာ မြန်မာစာအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။ ၄င်းကို အောက်တွင် ဖြေရှင်းပေးထားသည်။ မည်သည့် Version မဆို မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။မရသည်ဟူ၍ မရှိပါ။ မလုပ်တတ်၍သာဖြစ်ပါသည်။ပြုလုပ်နည်းကို အောက်တွင် Download ဆွဲယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သည့် Andriod application များကိုပါ တစ်ပါတည်း ရယူ နိုင်ရန် တင်ပေးထားပါသည်။
(မူရင်း စာမျက်နှာမှ စာသားများကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
အောက်ပါ Link တွင် သွားရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။
Andriod Tablet နှင့် Phone များအတွက် မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနည်း။
Posted by KHUNLAYKHAM at 09:17 No comments:
၂ ရက်ရှိပြီ ပုံတွေမမြင်ရတာ Facebook Server Error ကြောင့်ပဲ ထင်နေမိတယ် ။ သေချာပြန်ကြည့်တော့မှ mpt တစ်ခု တည်းဖြစ်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ် ။ တစ်ခုခု error တက်တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖေ့ ဘုတ်က ပုံတွေမမြင်ရသူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အနက်က
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး နဲ့အဆင်ပြေအလွယ်ကူဆုံးနည်းကိုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ အောက်မှာပေး ထားတဲ့ အဆင့် အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ ။
၁ ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ ။ Zip file နဲ့တင်ပေးထားပါတယ် .exe ဆိုရင် virus ဆိုပြီး Upload server တွေက ဘမ်းပစ်လိုက်ကြလို့ပါ ။ (Version 11.02 ပဲတင်ပေးထားပါတယ် Update တွေ လည်းရှိပါတယ် နောက်ပိုင်းသုံးရင်းနဲ့ သူ့ဘာသာသူ Update version ရပြီ ဒေါင်းမလားမေးရင် Ok or Yes လုပ်ရင် update ရလာပါလိမ့်မယ် )
၂ ။ Double Click နှိပ်ပြီး သူ့ကို run လိုက်ပါ ။ ခဏလောက်ကြာ တဲ့အခါ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Successfully connected to the server ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
၃ ။ ချက်ချင်းပဲ IE browser လည်းပေါ် လာပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ်က IE သုံးနေတာဆိုရင်တော့ တိုက်ရိုက်သုံး ယုံပါပဲ ။ မဟုတ်ပဲနဲ့ Firefox သို့မ ဟုတ် တခြား browser သုံးနေတာဆိုရင်တော့ အဲဒီပေါ်လာတဲ့ IE browser ကိုပိတ်လိုက်ပါ ။
၄ ။ ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Browser ထဲက Tools>Options>Advanced>Network>Setting > ဆိုပြီးအ ဆင့်ဆင့်သွားပါ ။
ဒါဆို ဖေ့ဘုတ်က ပုံတွေအကုန်လုံးပြန်မြင်ရပါပြီ ( မှတ်ချက် - ဒီနည်းလေးက အကုန်လုံးကျော် ခွလို့ရတဲ့ နည်းဖြစ် လို့ တခြား မမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေမှာမသုံးစေချင်ပါဘူး ပိတ်ထားတဲ့ဆိုက်မှန်သမျှ အကုန်ပွင့်ပြီး အကျိုးရှိ မယ့် အရာတွေပဲ ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ )
Posted by KHUNLAYKHAM at 09:14 No comments:
မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပြည့် စုံပါစေ
Get the Flash Player to see this player.Shoutcast & Icecast Server
အဆင်ပြေတလိုစုထားသော.နည်းများ February (17) March (69) April (18) May (23) June (3) July (2) August (4) September (1)
TaungGyi, Pa.Oh, Myanmar (Burma)
နောက်လာဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်. Picture Window theme. Powered by Blogger.